Ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlambela le-16 "Iinkcukacha zikaThixo", Yenza into eyiyo, ngaba unokwenza imisebenzi igcine isiqingatha
Ikhaya / Blog / Ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlambela i-16 "Iinkcukacha zikaThixo", Yenza into eyiyo, Unokwenza ukuba imisebenzi igcine isiqingatha
2021 / 04 / 22 uhleloBlog 4695 0
Imixholo yeeNdawo zokuhlambela eziNtsha
Kuyatshiwo ukuba ikhitshi legolide kunye negumbi lokuhlambela lesilivere. Ukuhonjiswa kwamakhaya abantu abaninzi, ukubaluleka kwegumbi lokuhlambela akuphezulu kangako. Kwaye, kwigumbi lokuhlambela yindawo esihlala siyisebenzisa mihla le, kwaye singalandeli umkhwa okanye sichithe imali kuyo. Malunga nendawo yokuhlambela kwezi 16 zincinci, kufuneka uyazi!
Ukufakwa kwigumbi lokuhlambela kunokolulwa ngetephu, yindaba elungileyo yokuthanda ukuhlamba i-OCD yeenwele. Ngokwesiqhelo ukusetyenziswa kunokuba notshintsho oluninzi ukubuyisela amanzi ngaphandle. Kungumsebenzi ofanayo nentloko yeshawa kwindlu yangasese. Tsala ukuhlamba iinwele zakho, zibuyisele umva xa zingasetyenziswa. Ekuseni ngokungxama ukuya emsebenzini, awunyanzelekanga ukuba uvule ishawa ukuze ufumane amanzi.
Emva kwezixhobo zokucoca emnyango
Umva womnyango wegumbi lokuhlambela usetyenziselwa ukugcina izixhobo zokucoca, xa kuthelekiswa nekhabhathi ekhethekileyo yokugcina ilula kwaye iyabiza. Xa uvula umnyango, awuyi kuchaphazela ubuhle bomnyango. Izixhobo zokucoca udonga ezixhonywe phezulu nazo zinokufunxwa kakuhle kwaye zomile, ngekhe zivelise ivumba. Unokucoca ngokuthe ngqo kwigumbi lokuhlambela, imigca emifutshane yokuhamba.
Ishelufu yokomisa iinwele
Isixhobo sokomisa iinwele musa ngqo kwi-countertop, sinokugcinwa ngokusebenzisa iishelufu ezingenazikhonkwane, kuyacetyiswa ukuba ukhethe ngeekhoyili ukunciphisa amanzi eplagi. Kwaye eyona ilungileyo yile modeli yendalo iphela, iintlobo ezahlukeneyo zokomisa iinwele zinokufakwa. Ukudityaniswa kombala ayisiyixabiso liphezulu kuphela, kodwa ikwanokunika igumbi lokuhlambela ukwenza i-accents.
Ikhabhathi yegumbi lokuhlambela i-30 cm
Ikhabhathi yegumbi lokuhlambela i-30 cm, kunokuba ishiye isithuba esincinci ukuba icoceke, ezantsi nazo zinokubeka iibhasikiti zokugcina, njl., Iyonke nayo ayibonakali inkulu. Ewe kunjalo, ukuba uyakwenza oko, umjelo wamanzi kwigumbi lokuhlambela ungcono ukwenza umqolo wodonga, emazantsi awuyi kutyhila umbhobho ongathandekiyo.
Ukumanzi okumanzi nokomileyo
Igumbi lokuhlambela alinako ukwahlula iJapan kane, kodwa kungcono nokwenza ukwahlula okumanzi nokomileyo, ukuze ukuhlamba kunye nendlu yangasese kungaphazamisani. Ukuba baninzi abantu abahlala endlwini, kubaluleke ngakumbi ukwenza njalo.
Indlu yangasese ekrelekrele
Izindlu zangasese ezi-Smart ziyabiza, kodwa zezona zihambele phambili kwezobuchwephesha kwaye zezona zangasese zifumanekayo.
I-Niches yeyona ndlela yokunyusa indawo yokugcina kwigumbi lokuhlambela, ngakumbi igumbi lokuhlambela elincinci, elinamashalofu achaphazela ishawa. Ungathini ngokongeza ii-niches ezimbini xa uhlobisa. Ngale ndlela ishampu, ijeli yeshawari, ukuhlamba ubuso, njl. Zinokubekwa phantsi. Umbindi we-niche unokuba zizitena okanye iinkuni zendalo. Xa uyilungisa, yityibilikise ngaphandle ukuze amanzi angafumani.
Umpu wokutshiza wethoyilethi
Umkhonto wendlu yangasese uluncedo ekucoceni kungekuphela indlu yangasese, kodwa nakwiindonga zangasese nasemgangathweni. Kuba amandla okugungxula makhulu, anokucocwa ngokugungxula kube kanye, asindise umfazi wendlu yesiqingatha somzamo.
Cwangcisa indawo yokugcina isiliphu kwindawo yokuhlamba
Khumbula ukuseta indawo yokugcina isiliphu kwindawo yokuhlambela yangasese, kodwa akukaze kucetyiswe ukubeka iislippers ngqo endaweni yazo. Ayimanzi kuphela, kodwa ikwajongeka ingcolile. Khetha i-rack-mounted slip slip racker njengale ukugcina isilayidi ngasinye somile kwaye sicocekile ngexesha.
I-Porcelain glue endaweni yeglasi yeglu
Isiseko sangasese kunye nesithuba somhlaba sisetyenziswa glu kwiglasi, kwaye iglu yeglu iya kuba ngumngundo emva kwexesha. Njani ngokusebenzisa iglu ye-porcelain, ixabiso lincinci kwaye alizukubumba. Xa kuthelekiswa neglasi yeglu kufuneka kwakhona isuse ukungunda, kodwa ugcine ixesha elininzi kunye neendleko ezifanelekileyo.
Indawo yokufudumeza indawo yokufudumeza inamandla ngakumbi kunendawo yokuhlambela kunye neefestile zokukhupha, zombini umsebenzi wokukhupha umoya, kodwa ukufudumeza, ukungcola, ukufudumeza ubusika. Ngaba unokomisa iimpahla, ukhetho lokuqala lwabantwana ekhaya.
Kwigumbi lokuhlambela elimxinwa, kuyacetyiswa ukuba ungayikhethi imigqomo yenkunkuma evulekileyo, eya kujongeka igcwele kakhulu kwaye inevumba.
Soloko uziva ungonwabanga xa usebenzisa indlu yangasese, usenokungabi nayo indlu yangasese. Akukho lula ukusebenzisa indlu yangasese, ikwanciphisa ukuqhina. Kukho abantwana ekhaya, isitulo sangasese sinokunceda abantwana bafunde indlu yangasese Oh.
Umqulu ophethe iphepha langasese
Ukuba unosapho olukhulu, kuyacetyiswa ukuba usebenzise isitshixo sephepha langasese esiphindwe kabini. Lo mqulu usetyenziswa ngokuqhelekileyo, kunye nomthamo wokugcina, ukuphepha ukuhlazeka kwendawo yokuhlambela ngaphandle kwephepha ngokukhawuleza.
Umtshabalalisi wamanzi oshushu
Umgangatho wegumbi lokuhlambela ukugcina ixesha elide licocekile kwaye licocekile akukho lula, kwaye ngomtshayelo womlingo wokutshayela, konke kunokuba lula ngokulula. Nokuba kukuhlambela yonke imihla okanye igumbi lokuhlambela elinamanzi amileyo, thatha isikhuseli samanzi ngesikrwece. Iziphumo zingcono kune-mop, kodwa akukho manqaku amanzi.
Amakhaya amaninzi, umnyango wokuhlambela awunanto, indawo ichithekile. Ngapha koko, izixhobo zokucoca azinakuze zigcinwe.
Ngaphambili :: Yehlabathi Lokuqala! Indawo yokuHlala ebhafini eKhuselekileyo neLuncedo, ukuze “Uzihlambe” kwindawo yakho